Flim2MM: July 2017
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မှီ အာရှမှာ ဂျပန်တွေ အုပ်စိုးစဉ်ကပေါ့
မန်ချူးရီးယားပြည်နယ် စစ်တပ်အတွက် ဂျပန်ပြည် တိုကျိုကနေ ရွှေ ၈ တန် ပို့ပေးလိုက်တယ် ။ အဲဒိရွှေတွေကို ယာမာတိုဘဏ်မှာ ခဏ သိမ်းထားမယ် ။ ပြီးရင် အီတလီကနေ အဲဒိရွှေတွေနဲ့ လက်နက်တွေ ဝယ်မယ် ။
ယာမာတိုဘဏ်ဆိုတာ ဥရောပဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေ ရေးဆွဲပြီး ဂျပန်တွေ ဆောက်ထားတဲ့ ဘဏ်ပဲ ။ ဘဏ်နံရံကတင် ၉ ပေထူတယ် ။ အမြှောက်ဆံတောင် မဖောက်နိုင်ဘူး ။ လေဝင်လေထွက်ပေါက်ဆိုတာလည်း ခြင်တောင် ဝင်မရဘူး ၊ ရေထွက်ပေါက်ကလည်း ပိုဟပ်တောင် မထွက်နိုင်ဘူး ။ စီးပွားရေးသမားအမြင်နဲ့ကြည့်ရင် အလုံခြုံဆုံးဘဏ်ပေါ့ ၊ စစ်သားတစ်ယောက် အမြင်မှာတော့ ယာမာတိုဘဏ်က ခံတပ်ပဲ ။
မန်ချူးရီးယား တော်လှန်ရေး မျိုးချစ်တွေက ရွှေတွေကို ဘဏ်ထဲ မရောက်ခင် လမ်းက ဖြတ်လုချင်တယ် ။ ရွှေတွေသာ ဘဏ်ထဲ ရောက်သွားရင် ဘယ်လိုမှ လုလို့မရနိုင်တော့ဘူး ။ ရွှေတွေနဲ့သာ လက်နက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် မန်ချူးရီးယားပြည်နယ်ရှေ့ရေးဟာ မတွေးဝံ့စရာပါပဲ ။
[GENRE]:……………………….… .:) Action,Drama
[FILE SIZE]:…………………….….:) 751 MB
Posted by Y Junction at 7:40:00 AM No comments:
လောင်ကျွမ်းစေသော နှင်းဆီ - Kularb Fai (2013) Episode-2
လောင်ကျွမ်းစေသောနှင်းဆီ ဒုတိယပိုင်း ...
[FORMAT]:………………………….:) Web / 360p
[GENRE]:……………………….… .:) Asia,Action,Drama
[FILE SIZE]:…………………….….:) 478 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1 hr 47 mins
[Translate By]:……………………..:) Soelin Myat
ကြေးစားမှာလဲ အသည်းနဲ့ပါ။ လာပါပြီ ရမ်ဘို လို့ လူသိများတဲ့ Syvester Stallone နဲ့ ဇောရိုးမင်းသား Antonio Banderas တို့ အပြိုင်ဝင်ကြဲတဲ့ Action, Crime, Thriller အမျိုးအစားဇာတ်ကားကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကြေးစား လူသတ်သမားလောက ကနေ အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပေမယ့် နောက်ထပ်ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ယောက်က သူရဲ့လက်ကျန်အလုပ်တွေကို လိုက်လုပ်နေတာ တွေ့တဲ့ အခါမှာတော့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
သေခြင်းတရားနဲ့ယှဉ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်မလား
ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့ အနှစ်သာရပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရာဇဝတ်မှု ဇာတ်ကြမ်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် အထူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Crime , Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 602 MB
Posted by Y Junction at 11:21:00 PM No comments:
ညီဖြစ်သူစုံထောက်အားယုံစားကာ ပိုင်ဆိုင်သမျှငွေအားလုံးကိုစတော့ကစားမိလို့ ပါမောက္ခအဖြစ်မှ ဆေးအရောင်းသမားဖြစ်နေရတဲ့ လူတစ်ယောက် သူနေထိုင်ရာက ဆိုးလ်မြို့ မိန်းမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက် အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ပေမဲ့ ဆေးရောင်းရဖို့အတွက် ဆရာဝန်ရဲ့ကလေးတွေကိုကစားကွင်းလိုက်ပို့ကာ အစေခံအလုပ်သမားသာသာ လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ကနေထွက်ချင်ပေမဲ့ မိသားစုရှေ့ရေးအတွက် အောင့်အီးကာလုပ်နေရတဲ့လူ။
တစ်ရက်တော့ ဆေးဝယ်နေကြ ဆရာဝန်အဖွဲ့ကိုဂေါက်ကွင်းလိုက်ပို့ရင်း ဆရာဝန်တစ်ယောက် ရေကန်ထဲပြေးဆင်းကာ ရေတွေအငမ်းမရသောက်ကာ သေဆုံးသွားတာကိုတွေ့ရပြီးနောက်။
ဆိုးလ်မြို့အတွင်းဟန်မြစ်ကမ်းစပ်မှာ တွေ့ရတဲ့အလောင်းကို စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ ဝဝတုတ်တုတ်ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်အဖြစ်မှ တစ်ညအတွင်းထူးဆန်းစွာပိန်လှီခြောက်ကပ်နေမှု။
အပန်းဖြေစခန်းမြို့လေးမှာ မိသားတစ်စုလုံး အာဟာရဓာတ်ကုန်ခမ်းကာ သေဆုံးမှု။
ထို့နောက်မှာတော့ ကိုရီးယားတစ်နိုင်ငံလုံး ထူးဆန်းတဲ့လူသေမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ။ထိုသေဆုံးမှုတွေဟာ သူ့မိသားစုကိုပါ ထိခတ်ကျီစယ်လာတဲ့အခါ သေမင်းရဲ့ဖိတ်ခော်မှုကနေ သူ့မိသားစု လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်မလဲ ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲ သူအောင်မြင်မှာလား သေဆုံးမှုတွေကရော ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။
မိသားစုလိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ် ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ရှိတဲ့ လျှို့ ဝှက်သည်းဖို ဇာတ်လမ်းမျိုးကို ကြည့်ချင်ပါက downloadဆွဲပြီးကြည့်လိုက်ကြပါ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - NEVER
[FILE SIZE]:…………………….….:) 677 MB
[Translate By]:……………………..:) NEVER
Posted by Y Junction at 5:02:00 AM 1 comment:
El Gringo(Bad Yankee) 2012 မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb: 5.5/10 Geners: Action,Drama Release Run Time:90mins ဒီတစ်ခေါက်တော့ Undisputed III နဲ့ Boyka:Undisputed ကားတွေမှာ လက်ဝှေ့ သမား ဘွိုက်ကာအဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး Scott Adkins ရဲ့ 2012ထွက် အက်ရှင်ကားကောင်း တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် လူတစ်ယောက်(Scott Adkins)ဟာ သူ့အပေါင်းအပါ DEA(မူးယစ်နှိမ်နင်းရေး)ရဲဘော်တွေနဲ့ မက္ကဆီကိုနယ်စပ် မစ်ရှင်တစ်ခုကအပြန် ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးအယောင်ဆောင် သေနတ်သမားတွေရဲ့ ချုံခိုတိုက်တိုက်ခံခိုက်ရပြီး. . . အချင်းချင်းပြန်လည်ပစ်ခတ်ကြရင်း. . .မစ်ရှင်အောင်မြင်လို့ ရလာတဲ့ 2billion ငွေထုပ်ကြီးကိုပိုက်. . .မက္ကဆီနယ်မြို့လေးတစ်ခုဆီကို ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ် သူရောက်လာတဲ့ မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဆိုတာက တကယ့် မူးယစ်ရောင်းဝယ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့. . .ဂန်းစတားတွေနေတဲ့ မြို့. . . ငွေထုပ်ကြီးတကားကားနဲ့ ဒုစိရိုက်မှုတွေ ထူပြောလှတဲ့ မြို့လေးမှာ. . .ကျားတွေရဲ့အလယ်ကို ရောက်သွားတဲ့ ယုန်သူငယ်လို. . .အမဲဖျက်ချင်သူတွေက သွားရည်တမြမြနဲ့ အမြဲမပြတ်ချောင်းမြောင်းနေပါတယ် . . . Scott Adkins ရဲ့ ဇာတ်ရုပ်အရ အကြမ်းပတမ်း အသတ်အပုတ်တွေချည်း ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အန္တရာယ်တွေ ထူပြောလှတဲ့ ရန်သူတွေလက်ကနေ လွတ်အောင်ပြေးနိုင်မလား. . . ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့. . .ဆက်လက်ရှုစားအားပေးပါ ခင်ဗျာ. . .
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Myint Thu(ငှက်ကလေး-နည်းပညာ)
[Translate By]:……………………..:) Myint Thu ( ငှက်ကလေး -နည်းပညာ)
Posted by Y Junction at 10:39:00 AM3comments:
2009 ခုနှစ်မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ ဗီယန်နမ်ဇာတ်ကားဆိုပြီး အထင်တော့ မသေးလိုက်ပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့ကြမ်းပေ့ရမ်းပေ့ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ကြောင်း IMDB မှာ 6.0 ရထားတာ သက်သေထူနေပါတယ်။
Poster မှာ ပြောထားရေးထားတဲ့ စာကြောင်းလေးက ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အညွှန်းကို ရေးစရာမလိုအောင် ဖော်ပြထားပါတယ်။ " Getting out the gang....is just as hard as getting in." တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။
တကယ့် Gangster ကားစစ်စစ်ပါ။
ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ရဲ့ လက်ရုံးဖြစ်တဲ့ Trinh (Veronica Ngo) က အဓိကဇာတ်ဆောင် အဖြစ်ပါဝင်ပြီး Quan (Johnny Tri Nguyen) ကလည်း တွဲဖက်ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ
Jeonju International Film Festival က ပေးအပ်တဲ့ NETPAC ( Network for the Promotion of Asian Cinema) Award ကို ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်တဲ့အခန်းတွေဆိုရင်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ရိုက်တဲ့ကားဆိုပေမယ့် တော်တော် အဆင့်မှီပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကလည်း ခုချိန်ထိ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေရတုန်းပါပဲ။ မင်းသမီး Veronica Ngo ဆိုရင်လည်း Netflix က ထုတ်တဲ့ Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016) ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ခံစားကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။
Rated-R အဆင့် ရှိတဲ့ကားပါ။
(မှတ်ချက် - Gangster များသည် Tattoo မပါလည်း Gangster ပုံစံ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ထားပါသည်)
[FILE SIZE]:…………………….….:) 903 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 30 mins
Posted by Y Junction at 10:23:00 AM No comments:
Soldier(1988) IMDB 6/10 Genres. Action,Crime,Sci-Fic ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ အနာဂါတ်ကိုမျှော်ကြည့်တတ်ပြီး ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ ကလေးငယ်တွေကို လူသတ်လက်နက်စစ်သားတွေအဖြစ် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖို့မွေးကင်းစအရွယ်မှာပဲရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်. . . အဲ့ဒီစစ်သားတွေထဲမှာမှ ဆာဂျင်တော့ဒ်(Kurt Russell)ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ပေးမှုတွေနဲ့ အတူ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ အတော်ဆုံး အကြမ်းအခံဆုံး နဲ့ တိုက်ပွဲတွေအလီလီ အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ စစ်သားဟောင်းကြီး တစ်ယောက်ပေါ့...
အသက်မသေတဲ့ တော့ဒ်တစ်ယောက် ဟိုးနှစ်ပေါင်း12နှစ်ကျော်လောက်က ယာဉ်ပျက်ကျပြီး အမည်အသိဂြိုလ်တစ်ခုပေါ် သောင်တင်နေတဲ့ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေရဲ့ရွာကို ရောက်သွားခြင်းခြင်းဖြစ်တယ် သူနေမကောင်းဖြစ်နေချိန် မေတ္တာဂရုဏာတွေနဲ့ ထုံမွှန်းထားတဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခုနဲ့ အတူနေခွင့်ရစဉ်မှာ တော့ဒ်တစ်ယောက် လူသားဆန်လာခဲ့ပါပြီ. . . ဘဝအသစ်မှာ ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ ကြမ်းပေ့ရမ်းပေ့စစ်သားကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ကို သနားဂရုဏာသက်စရာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ ဘာနဲ့တူသလဲ. . .ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို Fear and Discipline အကြောက်တရားနဲ့ စည်းကမ်းလို့ ဖြေသွားတဲ့အဖြေရယ်. . Soldiers deserve soldiers,Sir.စစ်သားဆိုတာ စစ်သားဘဝနဲ့ပဲ တန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေက ဒီဇာတ်ကားကို အမှတ်ရစရာ. . .စစ်သားတွေရဲ့ ဘဝကို စာနာ နားလည်မိစေမှာပါ. . . ဒီလိုနဲ့ သူကွန်းခိုရာ နေရာအသစ်ကို အာကာသယာဉ်ပေါ်က စစ်သားတွေဆင်းပြီး မဲမဲမြင်ရာ သတ်ဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ချိန်သူ့ကျေးဇူးရှင်ရွာကလေးကို ကာကွယ်ဖို့ . . .မကျေသေးတဲ့ အမုန်းကြွေးကို ဆပ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - မြင့်သူ (ငှက်ကလေး - နည်းပညာ)
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Drama, Sci-Fi
[FILE SIZE]:…………………….….:) 692 MB
Posted by Y Junction at 10:43:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 11:07:00 AM 8 comments:
ဒီတစ်ခါတော့ ထိုင်းစီးရီးတွဲလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
မောင်နှမ လေးယောက်ရှိတဲ့အနက် အမအကြီးဆုံး Saila ဟာ မောင်တွေ ညီမတွေဖြစ်တဲ့ Orn၊ Pong နဲ့ Da တို့ကို ငဲ့ညှာပြီး ကောလိပ်က ထွက် အလုပ်လုပ်ရင်း မိသားစုကို ထောက်ပံ့နေသူပါ။ အဖေဖြစ်သူက နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးပြီး ဆုံးသွား၊ အမေကလည်း မတော်တဆမှု တစ်ခုကြောင့် သေသွားတော့ အားလုံးရဲ့တာဝန်ဟာ အမအကြီးဆုံးအပေါ်မှာ ပုံလာတယ်။
အဲဒီအခါ အလုပ်တစ်ခုထဲ လုပ်နေရုံနဲ့ မရတော့ပဲ စာသင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုပါ တွဲဖက်လုပ်ပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ သူစာသင်ပေးတဲ့ တပည့်နဲ့အတူ အပြင်ဖက် ထွက်လာရင်း ရဲနဲ့လူဆိုး တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာရောက်တော့ သူမကို လူဆိုးက ဓားစာခံလုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်တိုင်တောင်မသိတဲ့ အစွမ်းတွေ ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီအစွမ်းက ဘာလဲဆိုတော့......
[FILE SIZE]:…………………….….:) 455 MB
Posted by Y Junction at 9:11:00 AM 1 comment:
Labels: Action, Asia, Drama, Series
Posted by Y Junction at 11:08:00 PM No comments:
Home Sweet Home ဆိုတဲ့ စကားလေးကို အရင်တုန်းက ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စကားစုအနေနဲ့ပဲ သိထားပါတယ်။ စဉ်းစားတက်တဲ့အရွယ်ရောက်မှပဲ သာယာချမ်းမြေ့သောမိသားစုဘဝရဲ့ တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးကြောင်းသိလာရပါတယ်။ အဝေးရောက်နေတဲ့ မိသားစုဝင်တိုင်းလည်း ပိုပြီးနားလည်ကြမှာပါ။ မိသားစုဆိုတာ နေတဲ့အိမ်နဲ့လည်း မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးနားလည်မှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲအပေါ်မူတည်ပြီး တည်ဆောက်ရတာပါ။The Croods က ဒါကို ထင်ဟပ်ပြသထားပါတယ်။
The Croods လိုမျိုး ကာတွန်းကားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းထဲမှာ အပြစ်ကင်းလို့၊ ပေးချင်တဲ့အချက်အလက် တွေကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာပေးတတ်လို့၊ video effect အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကို ခပ်လွယ်လွယ်ကူကူဘဲ နားလည်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အဓိကအချက်ကတော့ ပုံပြင်နားထောင်ရတာ နှစ်သက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာတွန်းကားထဲမှာ နောက်ခံအသံဖြင့် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေကလည်း တကယ့်နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone စတဲ့ တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေပါ။ ဒီနေရာမှာ Emma Stone ရဲ့ The Croods အပေါ်ထားတဲ့ အမြင်လေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
"မျိုးဆက်တိုင်းမှာ ကလေးငယ်တွေဟာ တစ်ချိန်ချိန် မိဘဆီက ခွဲခွာပြီး ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်ရမှာပါပဲ။ ငှက်ကလေးတွေ အရွယ်ရောက်လာရင် အသိုက်က ပျံထွက်သွားသလိုပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအမြင်တွေ ရှိနေဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်"ဟု Emma Stone က မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာဦးခေတ်က မိသားစုလေးအကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာကြီးဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကြောင့် သူတို့နေထိုင်ရာ ကျောက်ဂူလေးပျက်စီးသွားပြီးနောက် အပြင်လောကထဲလျောက်သွားရင်း မိသားစုပြင်ပမှ တီထွင်စဉ်းစားတတ်သော ကောင်လေးနှင့် ဆုံစည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထူးခြားဆန်းပြားလှသော အပြင်လောကထဲ လျောက်သွားရင်း သာယာလှပသော ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုစီ အမှတ်မထင် ရောက်သွားခဲ့ပုံလေးကို တင်ဆက်ထားတာပါ။
ကြည့်ပြီးသားဆိုရင်လည်း ပြန်ကြည့်တိုင်း မတူညီတဲ့ အမြင်လေးတွေရရှိလာမှာပါ။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 743 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1 hr 38 mins
[Translate By]:……………………..:) Myint Thu (ငှက်ကလေး - နည်းပညာ)
Posted by Y Junction at 10:13:00 PM 1 comment:
ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်လောကမှာ မသိမဖြစ်ထဲမှာပါတဲ့ မင်းသားကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Sammo Kam-Bo Hung လို့ခေါ်တဲ့ ဖက်တီးမင်းသား နဲ့ Biao Yuen (ဘောလုံးမင်းသား) တို့ အဓိကပါဝင်ထားတဲ့ ကွန်မန်ဒိုဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားကို Sammo Kam-Bo Hung ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့အနုပညာသက်တမ်းကလည်း မသေးပါဘူး။ အသက် ၁၂ နှစ်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်လောကထဲကို ဝင်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ဆောင်၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ၊ အကူအဖွဲ့စသည်တို့မှာ မှာဝင်ခဲ့ပြီး Bruce Lee နဲ့ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို လူသိများစေတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ Enter the Fat Dragon ( Bruce Lee ရဲ့ Enter the Dragon ကို ဟာသကိုယ်ခံပညာဇာတ်ကားပုံစံ တမျိုးဆန်း) ရိုက်ကူးပြီး Kung-Fu Comedian ကို စတင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Jackie Chan နဲ့လည်း မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး အများဆုံးတွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ၊ Heart of Dragon ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Once uponatime in China and America (1997) ကိုလည်း ဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သူပါ။
ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းကတော့ ဗီယမ်နန်မှာ အမေရိကန်တွေချန်ခဲ့တဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို သွားရောက်ဖျက်ဆီးတဲ့ ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Drama, War
[FILE SIZE]:…………………….….:) 746 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1 hr 33 mins
Posted by Y Junction at 9:26:00 PM 1 comment:
Labels: Action, China, Drama, War
လာပါပြီ ဂျက်ကီချန်းပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ခဲ့တဲ့ The Fearless Hyena ဇာတ်ကားဟာ Best Martial Art movie မှာ စာရင်းဝင်နေတဲ့ ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တက်သိပညာမနေသာ ဆိုတဲ့အတိုင်း လူငယ်လည်းဖြစ်တဲ့ Jackie Chan ဟာ အဖိုးဆီကသိုင်းပညာအမွေကို ထုတ်ပြချင်နေပါတယ်။ မမျှော်လင့်ထားပဲ ထုတ်ပြလိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့ နာမည်ကြီးသိုင်းကျောင်းတစ်ခုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဖိုးဖြစ်သူရဲ့ ရန်ဖက်ဟောင်းကျောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့.......
သိုင်းပေါင်းစုံမြင်ရမှာပါ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် ရိုက်ပြထားနိုင်တာကို အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Comedy
[FILE SIZE]:…………………….….:) 862 MB
Posted by Y Junction at 7:45:00 AM5comments:
Predators ကားတွေကို 1987 ခုနှစ်ကတည်းက စတင်သိခဲ့ကြတာပါ။ 1992 မှာ Predators2 ထွက်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ အခုကားကတော့ Predators3လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
Action, Adventure, Sci-Fi နဲ့ Thriller ရသများကို ခံစားချင်တဲ့ ပရိတ်သတ်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
နယ်ပယ် အသီးသီးက လူဆိုးလို့နာမည်တပ်ခံထားတဲ့သူတွေကို တောအုပ်တစ်ခုထဲမှာ ထားခဲ့ပြီး ရက်စက်တဲ့ ဂြိုလ်သားနဲ့ တိုက်ခိုက်စေတာပါ။ ဘယ်သူတွေ အသက်ရှင်မလဲ၊ ဂြိုလ်သားကို အနိုင်ယူနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကတော့ မိုးအေးအေး ရင်တုန်တုန်နဲ့ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 984 GB / 734 MB
G-Drive SD Small
Posted by Y Junction at 11:53:00 PM 1 comment: